Cisco I- ဆုနောက်ဆုံးအဆင့် | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 7, 2008 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2014 Douglas Karr
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကောင်းများဖြစ်သောဂျေဆန်၊ ဘီလ်၊ ကာလာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မင်္ဂလာပါကိုစင်စင်နာတီသို့ကားမောင်းသွားခဲ့ကြသည် နောက်ဆုံး I- ဆုတင်ဆက်မှု Cisco နှင့်အတူ။ Carmel စက်ရုံသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိသော်လည်း Cisco သည်သူတို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသင်းကိုရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲဝင် ၁၁၀၀ ကျော်နှင့် ငါတို့ကိုရွေးလိုက်တယ် နှင့် Semi-finalist 32 လုပ်လေ၏။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြိုင်ပွဲကိုစတင်ခဲ့သောဘုတ်အဖွဲ့၏ရှေ့မှောက်၌တင်ပြခဲ့သောနောက်ဆုံးအတွေးအခေါ် ၁၂ ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိအားမရှိဘူး
ဒီစီမံကိန်းနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်မယ့်အသင်းဖော်တွေအများကြီးကိုငါစဉ်းစားလို့မရဘူး။ သငျသညျကွိုးစားလုပ်သားများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရွေးချယ်သည့်အခါ ... အားလုံးသည်စိန်ခေါ်မှုများရှိသောအလုပ်များရှိသည်။ I-Prize ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းပမာဏကိုတကယ်ပဲဖြည့်စွက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်တော့သည့်အချိန်တွင်တက်လှမ်းနိုင်သောသူငယ်ချင်းများရှိခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တင်ဆက်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက် strain သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာမှထွက်ခွာသွားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
တစ်ဦးကနမူနာ Telepresence ၏ဗီဒီယို Youtube မှာရှိပေမယ့်အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝမပေးပါဘူး။
အခန်းသည် built-in ဗီဒီယိုကင်မရာများပါ ၀ င်သောကြီးမားသောဖန်သားပြင် ၃ ခုနှင့်တိုက်ရိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိသောဘဲဥပုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏တင်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်ရန်သင်၏လက်ပ်တော့ပ်ကို plugin လုပ်သောအခါ၎င်းသည်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးမြင်နိုင်ရန်ဖန်သားပြင်အောက်တွင်သာမက၊ အဝေးမှမြင်ကွင်းအောက်တွင်လည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းအဝေးတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုနေရာ (၃) နေရာတွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့် ၀ င်ရောက်လာသောအခြားဖုန်းခေါ်ဆိုသူများလည်းရှိခဲ့သည်။ စနစ်သည်မည်သည့်နေရာတွင်စကားပြောနေသည်ကို အခြေခံ၍ ပုံကိုအလိုအလျောက်လှန်ပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖန်သားပြင်အားလုံးသို့လှန်လှောခြင်းမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး မှပြောနေသည့်မျက်နှာပြင်သို့ရိုးရိုးလေးသာလှန်လိုက်သည်။ San Jose အဖွဲ့၏ဘယ်ဘက်တွင်နည်းပညာတစ်ခုအလုပ်လုပ်သောပုံကောင်းတစ်ပုံရှိသည်။ သူမ၏ထက်ဝက်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသင်ဟာနိုင်ငံရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အစွန်အဖျားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသင်အမှန်တကယ်မေ့သွားတယ်။ ဒါကအံ့သြလောက်အောင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေသဘောကျခဲ့ကြသည်။
နှလုံးသားတွေတုန်ခါနေပြီး Cisco မှအမှုဆောင်အရာရှိများစွာနဲ့ကျွန်တော်ဟာလူတိုင်းရဲ့နာမည်တွေကိုရေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲ Marthin De ဘီယာသို့သော် Cisco အဖွဲ့သည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်၊ Randy, Paula နှင့် Simon တို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့တွင်ရှိသောခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့်အတူချက်ချင်းပင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
မိနစ် ၆၀ အတွင်းဒေါ်လာဘီလီယံစိတ်ကူးတစ်ခုရောင်းချရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘီလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနှင့်အစည်းအဝေး၏အရှိန်ကိုထိန်းထားသူဖြစ်သည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှစက်မှုလုပ်ငန်းဒေတာနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအတွက် chimed ။ အခက်ခဲဆုံးအတားအဆီးကအဖွဲ့ကိုအဖြေနှင့်အခွင့်အလမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ Carla သည်ဆလိုက်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထုပ်ပိုးထားသောအချက်အလက်များ၏ပုံသဏ္captureာန်ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆလိုက်ကုန်းပတ်ကိုသရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။
သင်“ Point of Sales” စနစ်ဟုပြောသောအခါရှေးရှေးက barcode scanner, inventory database နှင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီးခရက်ဒစ်ကဒ်တောင်းခံနိုင်စွမ်းကိုချက်ချင်းစဉ်းစားသည်။ ဒါကပထမမိနစ် ၃၀ မှာငါတို့ပြောင်းရမယ့်ပုံစံပါ။
We ခဲ့ POS သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်ရန်အလားအလာများစွာရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအဖွဲ့အားအသိအမှတ်ပြုစေခြင်းအားဖြင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ - စာရင်းထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အစားအစာထောက်ပံ့ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ စာရင်းကိုင်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ မှာယူခြင်း၊ ကြိုးမဲ့စနစ်ပေးခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း၊
လူတွေက POS ကို“ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောငွေစာရင်း” အဖြစ်ရှုမြင်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာလွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀ ကပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိဂုံးချုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူး၏အဓိကမှာ POS ကိုစားသောက်ဆိုင်၏အချက်အချာဖြစ်စေရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆိုပံ့ပိုးရန်လုံခြုံစိတ်ချရသောကွန်ယက်တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
တင်ပြချက်၏အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့၏မျက်နှာများပေါ်ရှိအသုံးအနှုန်းများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်။ မြင်ရခြင်းနှင့်မီးလုံးများဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများသည် 'ဘယ်သူ၊ ဘာ၊ ဘယ်လောက်' သို့ 'သင်မည်သို့ပုံဖော်သည်၊ ဘာကြောင့်မဟုတ်' သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလျံတန်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အတူလက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုများကိုစိတ်ပျက်စေမည့်အလားအလာများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်မတက်သူ - စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကို Cisco ၏အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအနှောင့်အယှက်ပေးခံရသည်။
အစည်းအဝေးပြီးခါနီးတွင်“ Restaurant inaBox” ၏အကြံဥာဏ်များနှင့်ရောင်းချသူ agnostic POS hardware client များနှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားသည့်ပါးလွှာသည့်ဖောက်သည်များအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့ !!!! ဒါကငါတို့တလျှောက်လုံးပန်းချီကားဆွဲချင်တဲ့ပုံပဲ။ အဖွဲ့မှအလွန်ကောင်းသောအပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုများ၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကောင်းသောရလဒ်များရှိခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်လိုက်သည်။ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အနေနှင့်သူ၏အောင်မြင်မှုအတွက်စနစ်တစ်ခုသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးသည်ကိုအဖွဲ့အားအသိပေးခြင်းအားအစည်းအဝေးသို့ဂျေဆင်ကပယ်ချခဲ့သည်။
ငါကပိုကောင်းသွားပြီနိုင်မယုံ! ကျွန်ုပ်တို့ပြီးမြောက်နိုင်သည့်နောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရှိပါသည် အရင်းအမြစ်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိစ္စကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သတင်းအချက်အလက်ရယူရန်။ တိကျသောခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများအတွက်ဒေါ်လာထောင်ချီ။ ကောင်းမွန်သောလေ့လာသုံးသပ်သူနှင့်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
အခုငါတို့စောင့်နေကြပြီ Marthin သည်အခြားသူများ၏ 'Cisco' သည် 'သို့မဟုတ်' လုပ်ခဲ့သည် '၏အမြင်ကိုကြားခြင်းသည်မည်မျှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာချက်တစ်ခုဖြင့်အစည်းအဝေးကိုပိတ်လိုက်သည်။ သူတို့ဟာဒီအာကာသထဲကိုသူတို့မြင်ယောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဤအချက်သည် Cisco သည်ကုန်သွယ်ရေး၏အချက်အခြာကျမှုအဖြစ်ခိုင်မာစေလိမ့်မည်၊
အဖွဲ့သည်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးမိနစ် ၃၀ အကြာတွင်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုကြားနာရန်ဇွန်လအထိစောင့်ဆိုင်းပါသည်။ tick … tick … tick …
အကယ်၍ Cisco ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမရွေးပါကဤအကြံဥာဏ်ကိုဒေသတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့၊ ကောင်းကင်တမန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အကျိုးတူအရင်းရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးပြီးပြီဖြစ်သည်။ Cisco ၏ကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါက၎င်းသည်ရောင်းရန်ခက်ခဲသောအကြံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရန်ပုံငွေကို ရယူ၍ သူတို့၏ဖောက်သည်များဖြစ်လာလျှင်မဟုတ်ပါ။
Tags: Cisco သည် i- ဆုcisco iprize ပါကြေးနန်း
မေလ 7, 2008 မှာ 10: 34 AM
Cisco အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် Geoffrey Moore တို့အားကြီးမားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတင်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကံကောင်းခဲ့သည်။ (“ Chasm ကိုဖြတ်ကူးခြင်း - အဆင့်မြင့်ဖောက်သည်များအားစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချခြင်း” ၏စာရေးသူနှင့် Chasm Group ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ )
ဒါဟာထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါ။ ငါတို့အဖွဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အလုပ်အတွက်ငါဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Carla, Doug နှင့် Jason !!